SFI oo la doonayo in shirkadaha ay bixiyaan [Video] | Somaliska
Luuqada / Waxbarashada
Wasiirada waxbarashada iyo sinaanshaha Nyamko Sabuni oo qaabilsan koorsada SFI (Svenska för invandrare) ayaa ku dhawaaqday in ay dooneyso in SFIga lagu wareejiyo shirkadaha oo uusan keliya ku koobnaan kamuunada.
“Ma jiro nuuc iskuul kale oo dadku uga baxaan iyaga oo dhamysan marka loo barbar dhigo SFI. Sadexmeelood hal meel ayaa iskuulka ka tagtay qaar ayaa uga baxay shaqo ama caruurtoda darteed balse waxaa jira qaar uga baxay sababta oo ah waxbarashada oo aan wanaagsaneyn taasina ma ahan mid wanaagsan” ayay tiri Nyamko Sabuni.
Balse hada ayaa waxaa socda dib u habeyn lagu sameynayo SFI taasoo xooga la saarayo in natiijo ka dhalato koorsada iyadoo la doonayo in laysku qabto SFI, waxbarashada xirfada ama baraatiik. Arintaan ayaa hadaba ka socota dhowr magaalo.
Nyamko Sabuni ayaa hada qorsheyneysa in ay shirkadaha u furto SFIga oo iyagana ay awood u helaan in ay bixiyaan koorsada. Hada ayaa waxaa SFIga bixiya kamuunada oo keliya.
“Waxaan doonayaa in aan arko waxbarasho shaqsiyeed, waxaa wanaagsan in dhowr qeybood ay helaan fursada ay ku bixinayaan koorsadaan oo aysan ku koobnaan kamuunada oo keliya oo xooga la saaro suuqa shaqada”
ayay hadalkeeda ku soo afjartay wasiiradu.
SFIga ayaa ah koorso aad loo dhaliilo oo aan dadka waxbadan u faaideyn. Macalimiinta SFIga ayaa la sheegay in 10kii 1 keliya uu leeyahay tababar sax ah. Qorshaha Nyamko Sabuni ayaa u muuqda mid wanaagsan haddii laga dhabeeyo.
waxaan filayaa in arinta luuqadu aysan ahayn mida oogu mihiimsan ee dhibku wuxuu ka jiraa waa suuqa shaqada ee arintaan waa iska dheh luuqada waa arin ku xiran qofka iyo macalinka hadii aad dadaal bantahay waad barankartaa macalinkana su aalo ayaad raaxada ooga qaadi kartaa lkn shaqada ayaa muhiim ah hada ee suqa shaqada ha ka hadlaan.
Jimcale ma qalday bro?
waxaan filayaa caalamka kale ruuxa shaqada ayaa lagu baraa luqadda. Dadka USA, Australia iyo Canada jooga waa shaqeeyaan luqadana umadaa lagu dhex bartaa. Waxaan filayaa SFI macalin kaliya kuma bari karo hadii aadan helin socialising work (dhexgal shaqo). Hadaba Swedish-ku ha abuureen shaqo yeysan ku mashquulin luqad.
waa arrin lagu farxo waayo kamuunnada waxay is badeen awood gooniya waxa ayna ku caburiyaan dadka sfi ga barta waxyaabo badan oo aan waxba lagu fahmi karin . macalimiintuna sidoo kale madoonayaan in galaaska faaruq kanoqdo oo ardada ayay ku dhagaan si ay shaqo uga dhigtaan hadaba aad ayaan ugu riyaaqay hadalka kasoo yeeray saabuuni
waa arin lagu farxo in arinta wax laga badalo
SFI waana in wax badan laga faa iideestaaaaa
Jaamacada Jactadka Soomaaliyeed
aan u aqaan aniga SFi. uma aqaan lkn any way warkaas war raaayo waasa minii laga dhabeeeyo
ASC Aqyaarta dhamaan, waxan filaya waa arrin fiican in la sameyo qaab ka duwan kan hadda uu ku socda SFI, waayo dadka badankooda ayaga oo aan luqadda ku hadli karin ayey ka baxaan SFI, iyadoo weliba ay yartahay fursado kale oo sida SFI-ga ah, OO wax lagu baran karo, xitaa SAS lama dhihi karo wuu buxin karaa booska SFI-ga
asalamacaleykum warax matulahi wa barakatuhu waxan salamaya umada somaliyed meel kasta oo ey jogaan garhan jimcale iyo fekred wada yaasha kadib fekerkaga hadan ka hadlo waxan laqaba maxamed tisa waayo mahan iswidhish ku in ey ku mash qulan luqad ee wa in ey dadka shaqoyin u furan waayo aduunka luqad laguma xiro seda usa , australia iyo dhul badan oo kale afka ama luqada isdhexgalka aya lagu barta aniga san qabo ee dad ku shaqo aya muhiim ah ee hanasiyen wan xamaleyna ee anigu somali ayan nahay shaqo diyaar ayan u nahay
asc waxaan halkaan ka salamaya dhaman umada soomaliyeed meel kasta oo aay joogto gaar ahaan umada joogta sweden oo arinkaan laga hadlaya quseyo mida labaad luuqad laguma barto skol oo kaliya luuqad waxa lagu barta isdhaxgalka ku shaqaynta ku hadalka mahan iney islaan gabowday oo ku aragta inaad danynee lacagta yar ee ceyrtaa inaad ku ilaashee mesha waxaan layahay swedeshka shaqa hana siyaanno mesha inaan shaqaysano ayaan u joognaa uma joogno inaan ceyr gaadno damiirteenana ma ahan inaan fiirsano swedesh ka shaqaysanayaa waxan anahy hadan somali nahay dad ku xeel dheer dhanka shaqada u jajaban shaqada waxaan sida runtaa qodka markowsan shaqa haysanin la jogo mid 1o sana joogay intow shaqayay eysan dhamayn 2 sano muraalka aya ka dhimanaya arintaan waxaan doonayna in wax la iska saaro waa arin xasaasi ah
asc dhamaan waad salaman tahiin aqyaarta waxaan filayaa arintaan inay tahay mid wax ku ool ah wayo saan ognahayba waxa jira dad aan waraaqaha aqarisan karin dhamaystay afarta derejo oo lagu dhigo sfi oo ah A B C D ka dibna naqday qof luuqadi inuu yaqaan lagu siyyay shahado shaqaysana karo qofkina waraqda u soo dhacda ma aqarsan karyo dad inuu ula taga mahane marka waxan u arkaa arintan inay wax ka bedeli doonto hadii la dhaqan gelsho qorshahaan la qorshaynayo tan kalle mesha waxyaba laga soo hadlay waxbaa ka jira xaga macalimiinta wayo arday aan wax la barin ma la intixaami kara wa maya cashar aan la barin wax ma laga waydiin karaa wa maya maxuusa macalinka macalin ku yahay inuu ardada wax baro buuk u bilaabo una dhamayo taasna laguma ahyo sfi saad aragteen dhamaan gurgaada ku soo baro book somali iyo svenska isku fasiraa raadso ayaa ardaga lagu dhahyaa haduusan macalin wax baraynin ardaga mow iska joogo xafadiisa oo ku barto gurga somaliska lexkon marka dhaman waxaan wada ognahay arinkaa asc
SFI ga wax jiro maahan waxna laguma barto
um M. daaha says:
asc walalayaa sfi maahan jaamacad oo kale mana ahan in dadka loogu adkeeyo sida jaamacada oo kale hase ahaatee waa barashada luuqada oo kaliya , ma og tahiin in aan nahay daka markay soo bara kaceen kadib iyagoon iskuul u galin bartay oo ku hadla luqado kala duwan , tusaale ahaan kisawahiliga oo kale. marka waxay ila tahay inaan ku hadalka svaniska ka baran karno mush tamaca aan la nool nahay hadii ay noqdaan kuwo la dhax gali karo ama lala hadli karo
sax waye bro